सुरुमा दरो त्यसपछी नरम भिजेको हुने के हो ? यी युवतीहरुको यस्तो जवाफ (हेर्नुहोस भिडियो) — newsparda.com
सुरुमा दरो त्यसपछी नरम भिजेको हुने के हो ? यी युवतीहरुको यस्तो जवाफ आज भोलीको प्रबिधिको बिकास सँगै मान्छेहरु आफुले आर्थिक जोहो गर्नको लागि त्यसै गरी आफ्नो परिचय बनाउनको लागि साथै दर्शकहरुको मनोरञ्जनको लागि बिभिन्न काम कार्यहरु गरिरहेकै ह्न्छ । पछिल्लो समयमा आफुलाई सजिलो अनि मन पर्ने एउटा पेशा जुन यु ट्युव बनिरहेको छ । यस्मा धेरै जनाले बिभिन्न भिडियोहरु बनाएर यु ट्युवमा अपलोड गरेर बिबिन्न पैसा कमाउने बिभिन्न सामाजिक कार्यहरु पनि गर्दे आईरहेका छन ।”
नि शुल्क रुपमा बन्ने यु ट्युव एकाउन एउटा जिमेल आई डीवाट बन्दछ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल मध्ये यु ट्युव पनि आम मानिसहरुको उपयोगको लागि निकै राम्रो सुबिधा बनेको छ । हरेका दिन यु ट्युवमा सयौ भिडियोहरु अपलोड भएका हुन्छन भने लाखौं करोडौ दर्शकहरुले हेरिरहेका हुन्छन । यसबाट कतिले कयौं फाईदाहरु लिएका पनि छन भने कसैको यही सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले घरवार सँगै जिन्दगी पनि बर्बाद भएको छ ।”
आज भोलि का युवक युवतीहरु प्राय सबैजसोले फेसबुक यु ट्युव इन्स्टागा्रम इमो म्यासेन्जर लगायतको धेरै सामाजिक संजालको प्रयोग गरिरहन्छन । यही यु ट्युवमा दर्शकहरुको मनोरञ्जनको लागि सुरुमा दरो त्यसपछी नरम भिजेको हुने के हो भनेर मानिसहरुलाई प्रश्न सोधिएको छ त्यसमा के जवाफ दिन्छन मान्छेहरु हेरौं भिडियो कृपया यो भिडियो केवल रमाईलो को लागि र मानिसहरुको प्रतिकृया बुझ्नको लागि मात्र हो यसलाई केबल सामान्य रुपमा लिएरै हेर्नुहोला ।”https://samacharpostdainik.com/ बाट साभार गरिएको ।